Tartanka Cunitaanka Salibuunka ee Erciyes | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia38 KayseriTartanka Cunitaanka Soodhada ee Erciyes
Tartanka cunitaanka bolse ee erci
Erciyes, oo soo jiidata dareen weyn oo ka timaada gudaha iyo dibadaba oo leh heerar caalami ah iyo tas-hiilaad caalami ah, ayaa usbuuc walba qabta xaflado kala duwan. Erciyes A.Ş., oo ah shirkad hoos timaada Dowlada Hoose ee Magaalada Kayseri. oo ay maalgalisay Isweydaarsiga Badeecadaha ee Kayseri, tartan cunidda bolseed ayaa lagu abaabulay magaca "Patukla Sucla".
Erciyes, oo soo jiidata dareen weyn oo ka timaada gudaha iyo dibadaba oo leh heerar caalami ah iyo tas-hiilaad caalami ah, ayaa usbuuc walba qabta xaflado kala duwan. Erciyes A.Ş., oo ah shirkad hoos timaada Dowlada Hoose ee Magaalada Kayseri. iyada oo kafaala qaaday isweydaarsiga Badeecadaha Kayseri, tartan soodhadh ah ayaa lagu abaabulay magaca "Patukla Sucla". Duqa Magaalada Caasimadda, oo hadiyado kala duwan gudoonsiiyey, Memduh Büyükkılıç wuxuu sheegay in Kayseri ay tahay xarunta quruxda.
Erciyes, oo ah qiimaha ugu muhiimsan ee dalxiiska ee Kayseri, wuxuu sii wadaa inuu soo jiito dareen weyn gaar ahaan sabtida iyo axadda. Erciyes, oo awood weyn ku leh booqashadeeda maxalliga ah iyo soo-saareyaasha dhammaadka usbuucaan, ayaa sidoo kale soo booqda booqdayaasha fursad ay kaga qaybgalaan munaasabado kaladuwan. Mid ka mid ah dhacdooyinkaas, "Blast with Sucuk" tartan ayaa sababay sawirro xiiso leh.
Duqa Magaalada ee Tartanka. Memduh Büyükkılıç iyo afadiisa Dr. Wuxuu raacay Necmiye Büyükkılıç. Erciyes A.Ş. Selcuk Derin ayaa kaalinta koowaad soo galay, Murat Anlı labaad iyo İbrahim Budak saddexaad oo leh 9 meelood oo roodh ah tartanka oo ay qabanqaabisay Badeecadaha Badeecadaha. Duqa Magaalada Caasimadda Dr. Memduh Büyükkılıç ayaa siiyay. Tartanki ugu horreeyay waxaa la siiyay 3 kun oo TL ah, kan labaadna waxaa la siiyay 2 kun oo TL halka kan saddexaadna la siiyay 1000 TL.
“XARUNTA CAAFIMAADKA KAYSERI”
Hambalyo hambalyada ka soo qeyb galayaasha iyo qeybaha shahaadada, Duqa Magaalada Caasimadda. Memduh Büyükkılıç wuxuu yidhi, Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Gudoomiyaha Badeecadaha Badeecada Sicir Bağlamış oo aan taageerin dhacdadan quruxda badan iyo maamulka Isweydaarsiga. Marka ay timaado Kayseri, bolse, hilib doofaar iyo ravioli maskaxda ha ku soo dhacaan. Markay timaaddo Kayseri, xarunta caloosha, maskaxda, dalxiis dhaqameed iyo dalxiis caafimaad ayaa maskaxda ku soo dhaca. Haweeneyda Erciyes waxay noqotaa macaashka Kayseri. Mehmet Özhaseki, oo isagu mashruucan nooga keenay magaaladeenna, ayaa yidhi waanay u mahadsantahay Wasiirka Dhacdooyinkaas quruxda badani way sii socon doonaan. Erciyeskeena iyo Kayseri had iyo jeer waxaa lagu xasuusan doonaa qurux. ”
Rector of Erciyes University tartankii kadib. Dr. Mustafa Çalış wuxuu kaloo uga mahadceliyay Madaxweyne Memduh Büyükkılıç munaasabadihii quruxda badnaa ee lagu qabtay Erciyes. Pastrami iyo bolse ayaa loo adeegsaday dhagaystayaasha tartanka kadib.
Erciyes Mountain Mensedka Caanaha iyo Sausage
Bacon, sausage iyo Erciyes
Ma Sii Dheer, Tartanada Lamaanaha Toboggan wuxuu ku jiraa Erciyes markii 6-aad